Chen က lu ရဲ့အသစ် Semi-စွပ်အိတ် Single-တဖက်သတ် Anti-ဓါတ်ရောင်ခြည်ခဲဂျယ်လ်အင်္ကျီ - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Chen က lu
Chen က lu ရဲ့အသစ် Semi-စွပ်အိတ် Single-တဖက်သတ် Anti-ဓါတ်ရောင်ခြည်ခဲဂျယ်လ်အင်္ကျီ
အရေးယူ: ရောင်ခြည်-အထောက်အထား X-Ray အထောက်အထား
1. ခဲညီမျှ: 0.35 MMPB, 0.5mmpb; သို့မဟုတ်အခြားသောအကာအကွယ်ညီမျှ။
2. ပုံစံ: Semi-စွပ်အိတ်
3, function ကို: ကအဓိကအားဖြင့် X ကိုရောင်ခြည်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အသုံးပြုသည်အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်အရသိရသည်အဓိကအားဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှု, (X, gamma rays, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး) အတွက်အသုံးပြုသည်နိုငျသညျ, အသုံးပြုသူကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစီးရီးထုတ်ကုန်လိုအပ်သည်နှင့်အညီရှေးခယျြနိုငျ (0.5 MMPB gamma rays ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုယေဘုယျအားရှေးခယျြ) ။
အကာအကွယ်အဝတ်အစားအရွယ်အစားများအတွက် 3. ကိုးကားစရာ:
S ကမပါ။ : 900 (အရှည်) * 600mm (အကျယ်)
M ကအဘယ်သူမျှမ။ : 1000 (အရှည်) * 600mm (အကျယ်)
L ကိုအဘယ်သူမျှမ။ : 1100 (ရှည်လျားသော) * 600mm (အကျယ်)
4. အရောင်: ကနေရှေးခယျြဖို့ 12 အရောင်များ
900mm * 600mm (S) မ : အမြင့်များအတွက်သင့်လျော်သော 165cm 以下
1000mm * 600mm (M ) : အမြင့်များအတွက်သင့်လျော်သော 165cm-175cm
1100mm * 600mm ( L ကို ) : အမြင့်များအတွက်သင့်လျော်သော 175cm-185cm
ရှန်ဒေါင်း Chen က lu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ co ။ , LTD မှ။ လွတ်လပ်သောသုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်: 2018 wholesale price Hot Sale Apron Protection Clothes For Sale With Competitive
နောက်တစ်ခု: Chen က lu ရဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်-အထောက်အထားအင်္ကျီအကောင်း Single-တဖက်သတ်အကာအကွယ်စွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်
ဆေးရုံက X Ray ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဝတ်အစား
X ကို Ray ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးဆောင်ရော်ဘာအဝတ်အစား
X-Ray ROOM တွင်ခဲဝတ်စုံ